မည်သို့ကြောင့်လိင်ကုထုံးဖြစ်ခံစားရပါတယ်။ လိင်ကုထုံးပတေရုသ Saddington ။ (2019) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
မည်သို့ကြောင့်လိင်ကုထုံးဖြစ်ခံစားရပါတယ်။ လိင်ကုထုံးပတေရုသ Saddington ။ (2019)
လိင်ကုထုံးမကြာခဏအဟောင်းတွေစုံတွဲများနှင့်အတူဆက်နွယ်နေပေမယ့်ဖောက်သည်နီးပါးတစ်ဝက် 35 အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
အားလုံးလိင်ကုသလိုပဲ, သူ့ clients များနှင့်အတူပတေရုသ Saddington ရဲ့ဆွေးနွေးမှုများလျှို့ဝှက်ဖြစ်ကြပြီးသူကသူတို့ကိုအကြောင်းပြောနေတာများကမိမိတို့၏ယုံကြည်မှုကိုမချိုးလိမ့်မယ်။ မိမိအ client ပုံပြင်များရုံသူတစ်ဦးကုထုံးအဖြစ်သူ၏နှစ်ပေါင်း၏သင်တန်းကျော်လူငယ်များနှင့်အတူပြုတော်မူပြီအလုပ်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေကြတယ်။
ငါကလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်တွေအကြောင်းပြောပြတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိတော့ဘူး၊ ဒါကအဲဒါပဲဖြစ်ရမယ်။
လူစုထဲကအရာအားလုံးနှင့်အတူအကူအညီတောင်းငါ့ထံသို့မလာနိုင်အောင်ငါတစ်လိင်ကုထုံးပေါ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု သို့ နာကျင်လိင် သို့ vaginismus, ထိုးဖောက်မှုကြိုးစားခဲ့သောအခါလိင်အင်္ဂါတင်းကျပ်စေသည်သောအခွအေနေ။ တစ်ဦးကို client ငါ့ကိုမေးတယ်ဆိုပါက '' သင်သည်လက်ထပ်ဖြစ်ပါသလား '' ငါတဘက်, ငါပရော်ဖက်ရှင်နယ်သောအရာတို့ကိုမစောင့်, အဲဒါကိုဖုံးကွယ်ဖို့ထူးဆန်းပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ငါဖြစ်၏သူတို့ကိုပြောပြပေမယ့်ပါလိမ့်မယ်။ ငါကုထုံးသကဲ့သို့မမိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်ဤလူစကားပြောတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချို့ကိုသင် clients များနှင့်အတူတစ်ဦးနှောင်ကြိုးဆောဒါပေမယ့်သူတို့ပြဿနာများကိုကျော်လွှားကူညီပေးနေ၏လုပ်ငန်းစဉ်၏အပေါငျးတို့သတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါအလုပ်လုပ်တဲ့ဆေးခန်းမှာကုထုံးဟာဘယ်သူမှတကယ်မနေတဲ့အိမ်မှာထိုင်နေတဲ့အခန်းတွေနဲ့တူတယ်။ သက်သောင့်သက်သာထိုင်ခုံသုံးခုရှိတယ်။ တစ်ခုကငါ့အတွက်တစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်တွင်မိသားစုဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အချာကျသောအရာများမရှိပါ။
ငါစုံတွဲများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ - တစ် ဦး တည်းကလူဖြစ်စေသို့မဟုတ်တစ် ဦး တည်းအကြံပေးလိုသောမိတ်ဖက်နှင့်အတူတစ်စုံတစ် ဦး ဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ၂၉ နှစ်အရွယ်ရော့ဘ်ဟုခေါ်သောအမျိုးသားတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်ကိုသူ့ဟာသူလာတွေ့သောအခါသူသည်အတွေ့အကြုံပိုရင့်ကျက်သောရည်းစားအသစ်နှင့်သူ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူဟာအဲဒီလိုခံစားမှုကြောင့်ရှက်ရွံ့နေသောကြောင့်သူမသည်သူမအားကုထုံးတွင်မပါ ၀ င်လိုခဲ့ပါ။
တစ်ဦး session တစ်ခုအတွင်းမှာတော့, ငါအခန်းကဏ္ဍပြောင်းပြန်ခဲ့ကြသည်လျှင်အတွေ့အကြုံမရှိခြင်း, သူ့ကိုကွဲပြားခြားနားဆိုကယ်လီတွေ့မြင်စေမယ်လို့ရှိမရှိရော့မေးတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူအလျင်အမြန်ပြုလုပ်ခဲ့ပုံကိုအရေးမကြီးနားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်, သူသည်သူ့ကို join ဖို့သူမကိုမေးတယ်။ အဖြစ်မကြာမီကယ်လီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပြီးစတင်အဖြစ်, ရော့ရဲ့ယုံကြည်မှုပြန်လေ၏။ ခြားနားချက်ကိုဖန်ဆင်းသောအရာသူ့ကိုသူ၏စိုးရိမ်ပူပန်အကြောင်းကိုရိုးသားဖြစ်ခြင်းထက်သူတကယ်လုပ်ခဲ့တယ်ထက်ပိုသိဟန်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏ clients များအစောပိုင်း 20s ၎င်းတို့၏နှောင်းပိုင်းတွင် 40s အတွက်များသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်အငယ်ကလူကိုသင်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်အဖြစ်လိင်ကုထုံးရှာကြံ၏အဖြစ်ကြောက်လန့်နေကြသည်မဟုတ်။ တကယ်တော့ကျွန်မအလုပ်လုပ်နေခဲ့ဖူးတဲ့ 15 နှစ်အတွင်းငါ့ကိုတွေ့မြင်ရမှလာမယ့်အငယ်ဖောက်သည်များ၏အရေအတွက်တိုးအဖြစ်ယခုသို့ရတဲ့သူအများကြီးအဟောင်းတွေလူများ၏အရေအတွက်ကိုသတိထားမိတယ် အသစ်သောဆက်ဆံရေးကိုနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများယခုဝေးလျော့နည်းမညီကြောင်းဖြစ်ကြပြီး, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၏ porn ၏ဆိုးကျိုးများ နှင့်လိင်န်းကျင်မျှော်လင့်ချက်များပြောင်းလဲနေတဲ့ငါကလူပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံနှင့်ငယ်ရွယ်သောသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တက်လာမယ့်နေကြသည်ထင်ပါတယ်။ ငါဆဋ္ဌ-form ကိုအသက်အရွယ်ကဲ့သို့ငယ်ရွယ် clients များဟာသူတို့ရဲ့လိင်အကြောင်းကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ၎င်းတို့၏စိုက်ထူဆုံးရှုံးအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကနေအထိကိစ္စများနှင့်ငါ့ကိုကြည့်ဖို့လာမယ့်ရှိသည်။ ထိုအပြန်ပြောပြသည်နှင့်အညီငါအဘို့အလုပ်မလုပ်အဖွဲ့အစည်း, 42 ၎င်းတို့၏စင်တာများတဦးမှာလိင်ကုထုံးတက်ရောက်ခဲ့ကြသောလူများ၏ထက်ပို 2018% 35 အောက်မှာရှိကြ၏။
အခြားအတိုင်းအတာအဆုံး၌၊ ကျွန်ုပ်၏အသက်အကြီးဆုံး visit ည့်သည်သည်အသက် ၈၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်း ၂ နှစ်မျှဆက်ဆံရေးသစ်ရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ သို့သော်ကံမကောင်းစွာဖြင့်သူနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အသစ်သည်လိင်ဆက်ဆံရန်ရုန်းကန်နေရသည်။ သူတို့ဟာမိသားစုဆရာဝန်ကိုအတူတူသွားကြပြီးဆရာဝန်ကသူတို့အသက်အရွယ်မှာလိင်ဆက်ဆံနေတုန်းပဲအံ့အားသင့်နေသလိုခံစားရတယ်။ ဘယ်ဟာမှအကူအညီမရခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလာတွေ့တယ်။
လိင်ကုထုံးကိုရှာဖွေတဲ့လူများစွာဟာဆရာဝန်ဆီသွားဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ များသောအားဖြင့်သူတို့သည်ပြsomeoneနာအကြောင်းကိုတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အသေးစိတ်ပြောဆိုခွင့်ရလိုကြသည်။ လူအများစုကစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် - တချို့စုံတွဲတွေကသူတို့ရှေ့မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသနာတွေကိုငါ့ရှေ့မှာအခန်းထဲပြသဖို့လိုတယ်လို့တောင်ထင်ကြတယ်။ ဒါကသိသာမဟုတ်ပါ!
ငါ၏အအငယ်ဆုံးဖောက်သည်တဦးတည်းကသူ့စိုက်ထူနှင့်အတူဒုက္ခရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းင်သူတစ်ဦး 17 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူနဲ့သူ့ရည်းစားလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးသူကဆုံးရှုံးခဲ့ချင်ပါတယ်။ သူတို့ကနောက်ဆုံးမှာတက်ဖဲ့မိမိပြဿနာပေါ်ပါကအပြစ်တင်ပါတယ်။ သူကပေါ့ပေါ့ချိတ်-ups ကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်အရက်နဲ့သူ့ရဲ့အာရုံကြောအေးဆေးပေမယ့်ဘာမျှမအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသူဘာလုပ်ရမှန်းမသိခဲ့ပါင်။ အခုတော့အဲဒီမှာလည်းသူ့ကိုကြိုက်ပုံရသောသူမူကား, မိမိအတန်းထဲတွင် fancied မိန်းကလေးတစ်ဦးပါပဲ, ဒါပေမယ့်သူဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာကိုအပြီးပြောင်းရွှေ့စေကြောက်တယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူကအကြံဉာဏ်တောင်းရန်ကသူ့မိသားစုဆရာဝန်မှဖူးင်နှင့်သူရုံငယ်ရွယ်ကြီးနှင့်ထိုပြဿနာကိုသူ့ဟာသူထွက်အလုပ်လုပ်မယ်လို့ကြားပြောလေ၏။ သူရှိ၏နေစဉ်, သူအကြောင်းလက်ကမ်းကြော်ငြာပြောက် လိင်ကုထုံး ထိုသို့သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုသူရဲ့ကန ဦး အကဲဖြတ်မှုအတွက်လာကြည့်တဲ့အခါသူဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ သူကအစည်းအဝေးတစ်ခုလုံးအတွက်မျက်နှာနီရဲနေတယ်။
တိုင်းလိင်ကုထုံး session တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကျနော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်အများအားဖြင့်လိင်ပညာရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ခန္ဓာဗေဒရေးဆွဲကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်ရရှိကာစိုက်ထူစောင့်ရှောက်ဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်။ ငါသူ့ကိုသူ့အဘို့ကပြဿနာကိုခံခဲ့ရကြောင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြောင်းနားလည်ကူညီပေးခဲ့သည်။
ငါသူ့ကိုတစ်ခုစိုက်ထူရပြီးတော့သူကပြန်မရနိုင်တော့သောသူ၏ယုံကြည်ချက်ကကူညီမယ့်အတန်းအတွက်သုံးကြိမ်ဆုံးရှုံးဖို့အိမ်စာကိုပေး၏။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကပိုပြီးယုံကြည်မှုခံစားစတင်ခဲ့ပြီး, သူ၏ပြဿနာဖြေရှင်းခံရဖို့အဘို့အသာခုနစျပါးအစည်းအဝေးများခေါ်သွားတယ်။ ကုထုံးပြီးသွားပြီးနောက်တစ်လအကြောင်း, သူဗဟိုမှခေါ်သူယခုသူ၏လူတန်းစားကနေမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူထွက်, သူသည်သူတို့သည်မကြာမလိင်ဆက်ဆံနိုင်ပါလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့ပါတယ်ဟုအနည်းငယ် note ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။
စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နဲ့ဖြစ်လာမီ, ငါအထူးပညာရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်နှင့်အတူသားသမီးတို့အဘို့တစ်လူနေအိမ်ကျောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါကသူတို့ကိုထောကျပံ့ဖို့ပိုလုပ်နိုင်စေလိုကြောင်းဘယ်လောက်ဖိအားညာဘက်ကျောင်းကိုရှာဖွေတာနှင့်အချို့သောစုံတွဲများ '' ဆက်ဆံရေးပေါ်တွင်တင်မိမိတို့ကလေးအားဖြင့်ညာဘက်လုပ်နေတာကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ။ ငါအချိန်ပြည့်မသွားမီ, အကြှနျုပျ၏နေ့ကအလုပ်အတူတစ်စုံတွဲများတိုင်ပင်အဖြစ်နှစ်နှစ်လေ့ကျင့်ရေးနေခဲ့ရသည်။
ငါသည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးမျိုးကိစ္စများနှင့်အတူစုံတွဲများကူညီပေးနေခဲ့သည်သောအခါ, တခါတရံတွင်မိမိတို့၏ပြဿနာများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ကြောင်းသိသာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ငါအားလုံးအဆင့်ဆင့်ပေါ်သူတို့ကိုကူညီနိုင်ဒါလိင်ကုထုံးအတွက်လေ့ကျင့်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ငါသည်သူတို့၏လိင်ဘဝနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့နှောင်ကြိုးစိတ်ခံစားမှုပေမယ့်လိုအပ်အကူအညီနဲ့ခဲ့သူတစ်ဦးလိင်ကုထုံးအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီထိုနောက်ငါမကြာမီကိုမြင်လျှင်တစ်ခုမှာစုံတွဲအသီးသီးဟာသူတို့ရဲ့အစောပိုင်း 20s နှင့်အစောပိုင်း 30s ၌နေသော Matt နှင့်အဲလက်စ်ရှိကြ၏။
ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအရမ်းရှက်နေပုံရတယ်၊ ထိုင်ခုံမှာပြောင်းပြီးကျွန်တော့်မေးခွန်းတွေကိုဖြေတာကိုရှောင်ကြဉ်တယ်။ သူတို့သည်ငါနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုရန်တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ကြပြီး၊ သူတို့မှာစအိုလိင်ကဲ့သို့သောဖြစ်ပြီး၊ သူတို့ကလိင်တူချစ်သူဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကိုငါလက်မခံမည်ကိုစိုးရိမ်သည်။ ငါပြtheနာကစိုက်ထူမှုအခြေပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါဖြတ်သန်းသွားလာခဲ့တယ် - ငါကလိင်အကြောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ရိုးသားစွာပြောဆိုခြင်းဟာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုငါသိစေချင်တယ်။
Erectile ပြဿနာတွေနဲ့ အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ် လူတို့သညျအကြှနျုပျကိုကွညျ့ရှုခြင်းငှါလာကြသောအသုံးအများဆုံးအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်။ စိုက်ထူရှိသည်ဖို့နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်များအတွက်မျှော်လင့်ထားရှိစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်လိင်တူချစ်သူဆက်ဆံရေးကို, ခုနှစ်, ဖျော်ဖြေဖို့ ပို. ပင်ဖိအားရှိစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးလိင်ကွဲစုံတွဲနှင့်အတူ, လူကိုတိုက်ရိုက်အနည်းဆုံး, ယခုအချိန်တွင်အတွက်မှနှိုင်းယှဉ်ဖို့အတှကျဘာမှမရှိဘူးရဲ့သွားရမည်။
မက်နဲ့အဲလက်စ်တို့ဟာရင်းနှီးမှုကနေဖိအားပေးဖို့ထိထိရောက်ရောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့တယ်။ မိတ်ဖက်တစ် ဦး ချင်းစီသည်နာရီဝက်ခန့်တစ်နာရီမျှမထိဘဲသူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုပေးသောအရာများကိုပြုလုပ်ကြရသည်။ သူတို့သည်အဝတ်အချည်းစည်းရှိသော်လည်းတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မလိင်အင်္ဂါများနှင့်ထိတွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပါ။
နောက်ဆုံးတွင်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ကျော်ထိနှင့်ထိုးဖောက်မှုမှတက်တည်ဆောက်ခြင်းမပြုမီ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုနှိုးဆှဖို့ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူတို့ကအတွင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးထားဖယောင်းတိုင်နှင့်ရင်ခုန်စရာဂီတနှင့်အတူရက်စွဲတစ်ခုညဉ့်ကဲ့သို့, ဤအစည်းအဝေးများကုသ။ ဝမ်းသာစရာ, Matt ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုမကြာမီတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ကုထုံး၏အကြောင်းကို 15 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, Matt နှင့်အဲလက်စ်ထိုးဖောက်မှုလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာသူတို့လိင်အခါတိုင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြတယ်။ သူတို့ကသုံးလတစ်နောက်ဆက်တွဲ session များအတွက်အဆုံးသတ်ကုထုံးပြီးနောက်နောက်တဖန်ငါ့ကိုတွေ့မြင်ရပြန် လာ. , သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆီသို့အမှန်တကယ်ချစ်ခင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကအစသူတို့လက်ထပ်ပြီးရတဲ့ခဲ့ကြသည်ပြောတယ်! ဒါဟာသူတို့ပျော်ရွှင်ကောင်းစွာလုပ်နေခဲ့ကြသည်ကိုငါကြားထိုကဲ့သို့သောအကြီးအခံစားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြပါသည်။ သင်သည်တိုင်ပင်မှူးမတ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသည့်အခါလူများစိတ်ဝင်စားကြသော်လည်း၊ သင်သည်လိင်ကိစ္စကုထုံးတစ်ခုဟုသင်ပြောသောအခါမတူကွဲပြားသောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုအမျိုးမျိုးရှိသည်! သူငယ်ချင်းတချို့ကလိင်နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်အရာအကြောင်းမဆိုပြောဆိုကြမည်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အနည်းငယ်မသက်မသာပင်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများကမူသူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုပြောပြသည်။ သူငယ်ချင်းတချို့ကသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေ့နိုင်မလားမေးကြတယ်၊ သူတို့ကသူတို့သိတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတာကိုပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ခံစားရပေမယ့်သူတို့ကိုငါငြင်းပယ်ရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူအိမ်သို့မယူရန်အရေးကြီးသည်၊ သင်သူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တစ် ဦး နှင့်ကုထုံးဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုမရှိပါ။
မကြာခဏ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကဲ့သို့သောအတိတ်ကစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ဆက်စပ်နေတာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှု။ မိန်းမအင်္ဂါဇာတ်နှင့်ရုန်းကန်နေရသောအမျိုးသမီးအမှုသည်တစ် ဦး ကသူ၏ညီငယ်ကိုမွေးဖွားစဉ်သူမ၏အမေသည်သေလုနီးပါးကြားနေရသည်ကိုကြားခဲ့ရသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲတွင်ကျွန်ုပ်သမိုင်းဟုခေါ်သည့်အရာကိုလုပ်ခဲ့သည်၊ ထိုတွင်ဖောက်သည်အားသူတို့၏ကလေးဘဝ၊ မိသားစုနောက်ခံနှင့်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ မာရိကဒီစိတ်ဒဏ်ရာအကြောင်းပြောပြတယ်၊ သူမငယ်ငယ်တုန်းကသူမမိခင်အော်သံနှင့်အခြားဆွေမျိုးများကမလုပ်နိုင်ပုံကိုပြောတာကြားဖူးတယ်။
မာရိသညျထိုးဖောက်မှုန်းကျင်သူမ၏ပြဿနာများကိုကျော်လွှားကူညီဖို့ကျနော်တို့အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ် သိမှုအပြုအမူကုထုံး (CBT), အရာအရာတို့သည်ငါတို့၏ကိုယ်အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုစူးစမ်း။ ငါသူမ၏တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားအနားယူရန်သူမ၏ဆုံးမသွန်သင်ခြင်း, အဖြစ်လူသိများကြသည်ဘယ်အရာကိုသုံးပြီးသူ့ကိုယ်သူမထိုးဖောက်ကျင့်သုံးမှသူမ၏အားပေးတယ် သင်တန်းဆရာ။ ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအတွက်လာနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးက၎င်းတို့၏လိင်အင်္ဂါတစ်ခုခုချပြီးဖို့အသုံးပြုရကူညီချောမွေ့ tampon-shaped တ္ထုဖြစ်ပါသည်။
ငါမျှမျှတတစောစောပိုင်းအခန်းဖို့လေ့လာသင်ယူဘူးဆိုရင်, ငါဒီအလုပ်အတွက်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ခက်ခဲပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းသောအဖြစ်အပျက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်ကြားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာများကိုတစ်ဖက်သို့ထားရန်လိုသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထိရောက်မှုမရှိသောကြောင့် client အတွက်ဝမ်းနည်းခြင်း၊
သို့သော်ဝမ်းနည်းဖွယ်အခိုက်အတန့်တိုင်းတွင်ပျော်ရွှင်သူများလည်းရှိသည်။ တခါတရံမှာကုထုံးပြီးပြီးချင်း 'မင်းရဲ့ကူညီမှုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတို့ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ' လို့ပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာ၊ တကယ်တော့၊ ၁၂ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာနှစ်စဉ်ပို့စကတ်ကိုကျွန်မရထားတဲ့စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်၊ သူတို့ဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောပြတယ်။ ကျွန်တော့်နောက်ကသူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကိုသူတို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။
သငျသညျဤလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေဘို့ကြီးတွေငွေရှာကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်လမ်းအတွက်, သင်ကပြုပါအဘယ်ကြောင့်အခြားအကြောင်းပြချက်ဖြစ်အဲဒီမှာရှိပါတယ်။ လူတွေကသင့်ရဲ့အကြံပေးချက်ကို၏အသုံးချနေနှင့်ပတ်ပတ်လည်မှာသူတို့ဘဝကိုဖွင့်ရန်စတင်မြင်လျှင်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခံစားမှုဖြစ်ပါတယ်။
Natasha Preskey မှပြောပြသည်
အဆိုပါအိပ်ရာပေါ်လိင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုရရှိနိုင် ဘီဘီစီ iPlayer